Posted by mmaedkza on September 8, 20200Comments
ကိုဗဈရောဂါပြောကျကငျးလို့ ကုသပေးတဲ့ ကြေးဇူးရှငျဆရာမကို မပွနျခငျ ကနျတော့တဲ့ ကလေးငယျလေး
ဖခငျရဲ့ အသုဘကိုတောငျ မမွငျလိုကျရပဲ ကုသဆောငျမှာပဲ ဆှမျးသှပျလိုကျရတဲ့ ကိုဗဈပိုးကုသနတေဲ့သမီးရဲ့ ရငျနငျ့စရာ အဖတေဈခု သမီးတဈခုရဲ့ အဖွဈဆိုး
( တရုတျတဈသြှူးငှကျပြော ဒုက်ခသညျအမှုကိစ်စ ဘုနျးကွီးကို လာပတျ)
ဒီနမေ့နကျ ၉နာရီကြျောလောကျက မိမိကို ကြောငျးသားလေးတှကေဧညျ့သညျလာတယျဆိုတော့ ရငျထိတျကနဲဖွဈသှားပွီး ဒုက်ခအလညျလာပွီထငျပါရဲ့ဆိုပွီး ထှကျကွညျ့လိုကျတော့ ထငျတဲ့အတိုငျး
ကဲ! ဘာ ကိစ်စလဲ? ပွော ဆိုတော့…တပညျ့တျောက မနျးလေးတိုငျး ဒသေကွီး ကြောကျဆညျမွို့နယျကလေးကြေးရှာကပါ နာမညျက သနျးထှနျး ပါ ဘုရား
ကိစ်စက တပညျ့တျော ရှာပွနျမလို့ လမျးစရိတျ လာတောငျးတာပါ ဘုရာ့ဘယျလောကျလဲ?မေးတော့ ၆ထောငျဆိုရငျ ရပါပွီ ဘုရား တဲ့လေ!ဒါနဲ့ ဘယျကလာ ဘယျလိုဖွဈတယျဆိုတာပွော အသံဖမျးထားမယျ
ဓါတျပုံရိုကျတငျပေးမယျ သဘောတူလား?မေးလိုကျတော့…တူပါတယျ ဘုရား တဲ့!ဒါဆိုရငျပွော လိမျလို့တော့ ဒုက်ခရောကျမယျနျော ဘုရားရှကွေီ့းမှာ!တငျပါ့! မလိမျရဲပါဘူး ဘုရား အမှနျတိုငျးပွောပွပါ့မယျ
တပညျ့တျောတို့ ငှကျပြောတောကိုတကျလာကွတာ သားအမိ/အဖ၃ယောကျပါဘုရား! ပါဝါနိုငျး လုပျကှကျ ၅မှာ လုပျကွတာပါရောကျတာ ၃လကြျောပါပွီ!ဒီမှာက ဆနျတှစေားစရိတျတှကေ ဈေးကွီးသူတို့ ကုမ်ပဏီက ၁၅ရကျ ၁ခါ ရှငျးပေးမယျဆိုပွီး မပွညျ့စုံဘူး
သူတို့က ပွနျမှပဲ တလုံးတညျး ရှငျးပေးမယျဆိုပွီး စားစရိတျပဲ ပေးတာကနျြတဲ့အသုံးစားရိတျက အကွှေးပဲ ဝယျစားရတော့ အဲဒီပိုကျဆံတှကေမစုမိဘူး! သူတို့က စာရငျးစာအုပျတှနေဲ့မှတျထဲ့ပွီးအကွှေးတှကေဈေးကွီးတော့(အတိုးနဲ့ယူစားရ) အကွှေးနဲ့ပဲ လုံးပွီး ပွနျပေးနရေတယျ
နစေ့ားခဆိုတာ မရှိတော့ဘူး! ရတာက ၁ရကျ ၆ထောငျ!သူတို့ကပွနျအလုပျသမားဆီက ဖွတျတာက ၅ရာဆိုတော့ ၅၅၀၀ ကနျြတယျ!စားစရိတျနဲ့ဆိုတော့ ဘယျလိုမှကို မလုံလောကျဘူး ပွီးရငျ သူတို့ကကုမ်ပဏီက မီးစကျနိုးပေးတယျပွောပွီး မီးကွေးလို့ပွောပွနျပွီး၁လကို ၆ထောငျ ကောကျပွနျတယျ ဘုရား
အဲဒါနဲ့ တပညျ့တျောရဲ့သမီးလေးနဲ့မိနျးမကိုပွီးခဲ့တဲ့ ၁၇ ရကျလောကျက ပွနျလှတျလိုကျပွီးတပညျ့တျော အကွှေးကအြေောငျဆပျ မှတျပုံတငျတောငျးပွီးခွလေငျြလြှောကျလာခဲ့တာ သူငယျခငျြးတှကေို လမျးစားရိတျရအောငျအဝတျအစားတှေ ယူထားပေးပါပွောတော့ သူတို့ကလညျးအလုပျမပွီးတော့ ဆနျတှပေဲရှိတာ
ဒါနဲ့ တပညျ့တျောက အဝတျအစားလိုကျရောငျးကွညျ့တော့ ဘယျသူမှ မဝယျဘဲ ဘုနျးကွီးကြောငျးကိုသှားကွညျ့ပါ မငျး ဒီလိုတော့ မရနိုငျဘူးလို့ ဆိုငျကယျပွငျဆိုငျကလူတှပွေောလိုကျလို့ ရောကျလာတာပါ ရထားခ ရရငျ ထမငျးမစားဘဲရသေောကျပွီးပွနျမယျ ရှာရောကျရငျ ရပွီ ဘုရား
ရှာမှာ တခွားလုပျစားရငျလညျး ၆ထောငျ ရတယျ ခေါငျးကွေးဖွတျတာမရှိဘူးဆိုပွီးပွောခဲ့တာပါ ဘုရားတဲ့လေ…ဒါနဲ့ မိမိကလညျး အေး ကောငျးပွီ ငါ လမျးစားရိတျပေးလိုကျမယျ
၆ထောငျ မဟုတျဘူး ၁၅၀၀၀ ပေးလိုကျမယျ အဝတျတှလေညျးလိုကျရောငျးမနနေဲ့ ရမှာ မဟုတျဘူး! နောကျပွီးတော့မငျး ငါ့ကို လိမျရငျတော့ ဘုရားကိုလညျး လိမျ သံဃာကိုလညျး လိမျမငျး ကြိနျစာသငျ့သလိုမြိုးဖွဈတတျတယျ မငျးကိုယျတိုငျ သိပေါ့ကှာ
ပွောပွီး ၁၅၀၀၀ ပေးလိုကျပါတယျ သူ့ကံပဲပေါ့လေ…ခှငျ့ပွုပါဦး ဘုရား ဆိုပွီး ဝပျခကြာ ပွနျသှားလသေတညျးပေါ့လေ…ရတနာမွတျ ၃ပါး ဘုနျးတနျခိုးတျောနဲ့ကယျတငျခွငျး မနကျခငျး အစီအစဉျ ၁ခနျးရပျ ပွီး၏…
(နာကငျြမှုမြားကို ကွငျနာမှုကမျးလကျဖွငျ့ ဝေးလှငျ့စအေံ့)
(ရှညျလြားသော ဒုက်ခအသံဖိုငျကို အကဉျြးခြုံး တငျပွခွငျးသာ)
တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျောကုမ္ပဏီက ပေးလိုက်တဲ့ ဒုက္ခကို လှလှကြီးခံစားခဲ့ရသူ
( တရုတ်တစ်သျှူးငှက်ပျော ဒုက္ခသည်အမှုကိစ္စ ဘုန်းကြီးကို လာပတ်)
ဒီနေ့မနက် ၉နာရီကျော်လောက်က မိမိကို ကျောင်းသားလေးတွေကဧည့်သည်လာတယ်ဆိုတော့ ရင်ထိတ်ကနဲဖြစ်သွားပြီး ဒုက္ခအလည်လာပြီထင်ပါရဲ့ဆိုပြီး ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ထင်တဲ့အတိုင်း
ကဲ! ဘာ ကိစ္စလဲ? ပြော ဆိုတော့…တပည့်တော်က မန်းလေးတိုင်း ဒေသကြီး ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ကလေးကျေးရွာကပါ နာမည်က သန်းထွန်း ပါ ဘုရား
ကိစ္စက တပည့်တော် ရွာပြန်မလို့ လမ်းစရိတ် လာတောင်းတာပါ ဘုရာ့ဘယ်လောက်လဲ?မေးတော့ ၆ထောင်ဆိုရင် ရပါပြီ ဘုရား တဲ့လေ!ဒါနဲ့ ဘယ်ကလာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာပြော အသံဖမ်းထားမယ်
ဓါတ်ပုံရိုက်တင်ပေးမယ် သဘောတူလား?မေးလိုက်တော့…တူပါတယ် ဘုရား တဲ့!ဒါဆိုရင်ပြော လိမ်လို့တော့ ဒုက္ခရောက်မယ်နော် ဘုရားရှေ့ကြီးမှာ!တင်ပါ့! မလိမ်ရဲပါဘူး ဘုရား အမှန်တိုင်းပြောပြပါ့မယ်
တပည့်တော်တို့ ငှက်ပျောတောကိုတက်လာကြတာ သားအမိ/အဖ၃ယောက်ပါဘုရား! ပါဝါနိုင်း လုပ်ကွက် ၅မှာ လုပ်ကြတာပါရောက်တာ ၃လကျော်ပါပြီ!ဒီမှာက ဆန်တွေစားစရိတ်တွေက ဈေးကြီးသူတို့ ကုမ္ပဏီက ၁၅ရက် ၁ခါ ရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီး မပြည့်စုံဘူး
သူတို့က ပြန်မှပဲ တလုံးတည်း ရှင်းပေးမယ်ဆိုပြီး စားစရိတ်ပဲ ပေးတာကျန်တဲ့အသုံးစားရိတ်က အကြွေးပဲ ဝယ်စားရတော့ အဲဒီပိုက်ဆံတွေကမစုမိဘူး! သူတို့က စာရင်းစာအုပ်တွေနဲ့မှတ်ထဲ့ပြီးအကြွေးတွေကဈေးကြီးတော့(အတိုးနဲ့ယူစားရ) အကြွေးနဲ့ပဲ လုံးပြီး ပြန်ပေးနေရတယ်
နေ့စားခဆိုတာ မရှိတော့ဘူး! ရတာက ၁ရက် ၆ထောင်!သူတို့ကပြန်အလုပ်သမားဆီက ဖြတ်တာက ၅ရာဆိုတော့ ၅၅၀၀ ကျန်တယ်!စားစရိတ်နဲ့ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှကို မလုံလောက်ဘူး ပြီးရင် သူတို့ကကုမ္ပဏီက မီးစက်နိုးပေးတယ်ပြောပြီး မီးကြေးလို့ပြောပြန်ပြီး၁လကို ၆ထောင် ကောက်ပြန်တယ် ဘုရား
အဲဒါနဲ့ တပည့်တော်ရဲ့သမီးလေးနဲ့မိန်းမကိုပြီးခဲ့တဲ့ ၁၇ ရက်လောက်က ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးတပည့်တော် အကြွေးကျေအောင်ဆပ် မှတ်ပုံတင်တောင်းပြီးခြေလျင်လျှောက်လာခဲ့တာ သူငယ်ချင်းတွေကို လမ်းစားရိတ်ရအောင်အဝတ်အစားတွေ ယူထားပေးပါပြောတော့ သူတို့ကလည်းအလုပ်မပြီးတော့ ဆန်တွေပဲရှိတာ
ဒါနဲ့ တပည့်တော်က အဝတ်အစားလိုက်ရောင်းကြည့်တော့ ဘယ်သူမှ မဝယ်ဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသွားကြည့်ပါ မင်း ဒီလိုတော့ မရနိုင်ဘူးလို့ ဆိုင်ကယ်ပြင်ဆိုင်ကလူတွေပြောလိုက်လို့ ရောက်လာတာပါ ရထားခ ရရင် ထမင်းမစားဘဲရေသောက်ပြီးပြန်မယ် ရွာရောက်ရင် ရပြီ ဘုရား
ရွာမှာ တခြားလုပ်စားရင်လည်း ၆ထောင် ရတယ် ခေါင်းကြေးဖြတ်တာမရှိဘူးဆိုပြီးပြောခဲ့တာပါ ဘုရားတဲ့လေ…ဒါနဲ့ မိမိကလည်း အေး ကောင်းပြီ ငါ လမ်းစားရိတ်ပေးလိုက်မယ်
၆ထောင် မဟုတ်ဘူး ၁၅၀၀၀ ပေးလိုက်မယ် အဝတ်တွေလည်းလိုက်ရောင်းမနေနဲ့ ရမှာ မဟုတ်ဘူး! နောက်ပြီးတော့မင်း ငါ့ကို လိမ်ရင်တော့ ဘုရားကိုလည်း လိမ် သံဃာကိုလည်း လိမ်မင်း ကျိန်စာသင့်သလိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ် မင်းကိုယ်တိုင် သိပေါ့ကွာ
ပြောပြီး ၁၅၀၀၀ ပေးလိုက်ပါတယ် သူ့ကံပဲပေါ့လေ…ခွင့်ပြုပါဦး ဘုရား ဆိုပြီး ဝပ်ချကာ ပြန်သွားလေသတည်းပေါ့လေ…ရတနာမြတ် ၃ပါး ဘုန်းတန်ခိုးတော်နဲ့ကယ်တင်ခြင်း မနက်ခင်း အစီအစဉ် ၁ခန်းရပ် ပြီး၏…
(နာကျင်မှုများကို ကြင်နာမှုကမ်းလက်ဖြင့် ဝေးလွင့်စေအံ့)
(ရှည်လျားသော ဒုက္ခအသံဖိုင်ကို အကျဉ်းချုံး တင်ပြခြင်းသာ)